Kaamirada OnePlus 7 Pro: kamarad seddexleey ah oo leh 3X lens lens | Androidsis
Si tartiib tartiib ah ayaan u ogaaneynaa wax badan faahfaahin ku saabsan soo socda ee calanka OnePlus. Waan ognahay inay jiri doonaan nooc caadi ah iyo nooc ka badan oo fitamiin ah. Iyo, markay arkeen astaamaha Kaamirada OnePlus 7 ProWaxay u muuqataa in nooca ugu awooda badani uu yeelan doono qayb sawir dhammaystiran oo dhammaystiran leh iyo inuu awood u yeelan doono inuu u istaago kooxaha la tartamaya inta u dhexeysa.
Iyo, iyada oo loo marayo daadinta cusub, waxaan awoodnay inaan xaqiijino in kamaradda OnePlus 7 Pro ay lahaan doonto sedex kamarad nidaam ah oo ka farxin doonta dadka isticmaala iyagoo si dhab ah u dhameystiraya qabashada. Aan aragno qalabka kor u qaadi doona kamaradda qalabkan.
Dillaac yar oo ka duwan maanta:
The #OnePlus7Pro wuxuu soo bandhigi doonaa seddex gadaal gadaal:
1. 48MP Lens Main
2. 8MP Lens Lens w / 3x zoom F / 2.4
3. 16MP Lens Ultra-Wide F / 2.2
Haddii aad u shaqeyneyso shirkad ama shirkad aadna goor hore u hesho Macluumaadka alaabooyinka aan weli la sii deyn - DM me 😉 pic.twitter.com/AV6UdjCvnE
- Max’ed J. (@Samsung_News_) April 20, 2019
Tani waxay noqon doontaa kamaradda OnePlus 7 Pro: lens-ka seddex-geesood leh xagal ballaaran iyo lens telephoto
Sida aad ku arki karto fariinta ay soo direen dadka yaqaan baxsiga Max J, oo loo yaqaan Samsung_News_, the Kaamirada OnePlus 7 Pro Waxay yeelan doontaa lens-ka ugu horreeya ee 48-megapixel, hubaal waa Sony IMX 586 sensor, oo ay taageereyso 16-megapixel sensor labaad oo leh aaladda furaha 2.2 taas oo sameyn doonta shaqooyinka ballaaran ee xagasha ah si ay u bixiso sawir ilaa 117 digrii ah.
Ugu dambeyntiina, waxaan heysannaa 8 megapixel shiddeed ee ugu dambeeya oo leh foorish fure 2.4 oo taas ayaa qaban doonta howlaha muraayadaha telephoto si loo bixiyo 3x zoom. Sida iska cad, waa inaan sugnaa sugitaanka rasmiga ah ee qalabka si aan u xaqiijino qaybta sawirada ee OnePus 7 Pro uu kor u kici doono, laakiin waxay umuuqataa in kamarada qaabkani ay noqon doonto wax lala yaabo.
Marka laga hadlayo qalabka intiisa kale ee OnePlus 7 Pro uu kicin doono, waxaa la filayaa inuu yeelan doono processor Qualcomm Snapdragon 855 oo ay la socdaan 6 ama 8 GB oo RAM ah iyo qaabab kaydinta oo kala duwan oo u dhexeeya 128 iyo 512 GB oo ah xusuusta gudaha. The soo socota 14 waxaan ka tagi doonaa shaki, inkasta oo la tixgelinayo halka ay ka soo baxday, haddana waxay u badan tahay inay runti tahay Kaamirada OnePlus 7 Pro noqo mid ka mid ah kuwa ugu fiican suuqa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OnePlus » Qalabka kamaradaha OnePlus 7 Pro ayaa xaday